Teny tsara indrindra avy amin'i Betty White - Victor Mochere
Betty Marion White Ludden dia mpilalao sarimihetsika sy mpanao hatsikana amerikana. Mpisava lalana tamin'ny fahitalavitra tany am-boalohany, nanana asa nandritra ny fitopolo taona, i White dia nalaza noho ny asa goavana nataony tamin'ny indostrian'ny fialamboly. Anisan'ireo vehivavy voalohany nifehy teo anoloana sy tao ambadiky ny fakantsary izy ary vehivavy voalohany namokatra sitcom (Fiainana miaraka amin'i Elizabeth), izay nahatonga azy ho Ben'ny tanànan'i Hollywood tamin'ny taona 1955. Ny White dia matetika antsoina hoe ny “Vehivavy Voalohany ao amin'ny Televiziona”, lohateny ampiasaina amin'ny fanadihadiana 2018 mitantara ny fiainany sy ny asany.
Rehefa avy nanao ny tetezamita ho amin'ny fahitalavitra avy amin'ny onjam-peo, White dia lasa mpandray anjara fototra amin'ny fampisehoana lalao amerikana, anisan'izany ny Password, Match Game, Tattletales, To Tell the Truth, The Hollywood Squares, ary The $25,000 Pyramid; nomena anarana hoe "vehivavy voalohany amin'ny fampisehoana lalao", i White no vehivavy voalohany nahazo ny loka Emmy Daytime ho an'ny mpampiantrano fampisehoana lalao miavaka ho an'ny fampisehoana Just Men! tamin'ny 1983. Nalaza ihany koa izy tamin'ny fisehoany tao amin'ny The Bold and the Beautiful, Boston Legal, ary The Carol Burnett Show.
Ny anjara asany lehibe indrindra dia i Sue Ann Nivens ao amin'ny sitcom CBS The Mary Tyler Moore Show (1973-1977), Rose Nylund ao amin'ny sitcom NBC The Golden Girls (1985-1992), ary Elka Ostrovsky ao amin'ny TV Land sitcom Hot any Cleveland (2010). –2015). Nahazo laza vaovao izy taorian'ny fisehoany tao amin'ny sarimihetsika hatsikana romantika 2009 The Proposal (2009), ary avy eo dia lohahevitra iray nahomby tamin'ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny Facebook hampiantranoana ny Saturday Night Live tamin'ny 2010, ka nahazoany loka Primetime Emmy ho an'ny mpilalao sarimihetsika vahiny miavaka amin'ny andian-dahatsoratra Comedy.
Niasa lava kokoa tamin'ny fahitalavitra i White noho ny olon-kafa tao amin'io fampahalalam-baovao io, ka nahazoany ny Guinness World Record tamin'ny taona 2018. Nahazo loka Emmy valo tamin'ny sokajy samihafa i White, Loka American Comedy telo, Loka Guild Actors telo ary Loka Grammy. Manana kintana ao amin'ny Hollywood Walk of Fame izy, ary tamin'ny 1995 dia nandray anjara tamin'ny Hall of Fame Television.
Ny sasany amin'ireo teny nalaina avy amin'i Betty White dia voatanisa etsy ambany.
“Akaiky sy malalan’ny foko ny biby, ary nanokana ny fiainako hanatsara ny fiainany aho.” - Betty White
“Tsy mandainga ny biby. Tsy mitsikera ny biby. Raha manana andro masiaka ny biby, dia tsara kokoa ny mikarakara azy ireo noho ny ataon'ny olona. " - Betty White
"Ny lolo dia toy ny vehivavy - mety ho tsara tarehy sy marefo isika, fa anaka, afaka manidina amin'ny rivo-doza isika." - Betty White
“Mora kokoa ny fanaovana tantara an-tsehatra. Amin'ny fanaovana hatsikana, raha tsy mahazo izany fihomehezana izany ianao dia misy zavatra tsy mety." - Betty White
“Aza miezaka ny ho tanora. Sokafy fotsiny ny sainao. Mijanona ho liana amin'ny zavatra. Be dia be ny zavatra tsy ho ela velona aho vao ho fantatra, nefa mbola liana amin’izany aho.” - Betty White
“Nandritra ny Depression, ny raiko dia nanao radio hamidy mba hahazoana vola fanampiny. Tsy nisy nanam-bola hividianana ireo radio ireo, ka hatakalony alika. Nanamboatra trano fialofana teo an-tokotany izy, ary nikarakara ny alika. - Betty White
“Toy ny fisintonana fotsiny ny Facebook, tamin'ny androko dia noheverina ho sazy ny sarin'ny fialan-tsasatry ny olona.” - Betty White
“Mila fotoana sy hery ny fisakaizana raha mety. Afaka mahazo vintana amin'ny zavatra lehibe ianao, saingy tsy haharitra izany raha tsy omenao fankasitrahana araka ny tokony ho izy. " - Betty White
“Mahazo matory tsara tarehy adiny valo farafahakeliny. Sivy raha ratsy tarehy ianao.” - Betty White
“Nandray ny fahefana ny gravity. Noho izany, tsy misy zavatra azoko atao momba izany… Ny olako amin'ny fandidiana plastika dia ny handeha amin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ho an'ny vehivavy ianao na toy izany, ary ho avy ireo namana taloha ary toa tsy fantatro izy ireo. - Betty White
“Naniry ny ho mpiandry biby fiompy foana aho tamin’izaho nihalehibe, ary nandrava mpiandraikitra ny biby aho! … mizara antsasany tanteraka ny fiainako – ny antsasany biby ary ny antsasany ny asa fampisehoana. Tsy afaka mangataka zavatra tsara kokoa noho ny zavatra roa tianao indrindra ianao.” - Betty White
“Zavatra maro no mahaliana ahy – tsy mampiseho raharaham-barotra sy fitiavako biby fotsiny. Miezaka foana aho amin’izay zava-mitranga eto amin’izao tontolo izao.” - Betty White
“Tsy nisafidy ny hanan-janaka aho satria mifantoka amin’ny asako. Ary tsy eritreretiko fotsiny, amin'ny maha-compulsive ahy, fa afaka mitantana ny roa tonta aho. " - Betty White
“Manao fanazaran-tena aho. Tsy manana olana amin'ny fitadidiako andalana aho noho ireo piozila ataoko isan'andro mba hampitony ny saiko.” - Betty White
“Tsy fantatro hoe ahoana no ahafahan'ny olona mahazo zavatra manohitra ny zavatra iray. Ataovy an-tsaina ny raharahanao manokana, tandremo ny raharahanao, ary aza manahy loatra ny amin’ny olon-kafa.” - Betty White
"Mivoaka any an-dakozia aho mba hamahanana ny alika, fa izany dia momba ny mahandro sakafo toy ny ataoko." - Betty White
"Tsy noheveriko fa mbola ho eo aho amin'izao fotoana izao amin'ny zavatra iray, fa mbola manana tombontsoa aho amin'izao fotoana izao." - Betty White
“Manana trano misy rihana aho ary ratsy fitadidiana, ka miakatra sy midina an’ireny tohatra ireny foana aho. Izany no fanazaran-tenako.” - Betty White
“Manana ny retrievera volamenako aho izao, Pontiac. Izy dia alika mpitari-dalana hanova asa avy amin'ny Guide Dogs for the Blind. - Betty White
“Tsy nanenina mihitsy aho. Tsy misy. Heveriko fa ny tenako no tsara vintana indrindra amin'ny tongotra roa. " - Betty White
“Manana ny hazondamosin’ny vodiny aho.” - Betty White
"Miraharaha fotsiny aho hoe karazan'olona mendrika ianao." - Betty White
“Mihomehy fotsiny aho. Efa voafitaka ve aho?” - Betty White
“Ataoko ho raharahako fotsiny ny fiarahako amin’ny olona mba hialako voly. Tsotra izany.” - Betty White
“Fantatro fa tsy ho faly aho raha tsy marina amin'ny tenako. Fanamafisana be loatra ankehitriny ny ivelany ary kely loatra ny toetra.” - Betty White
"Tiako ny ankizy, ny hany olana amin'ny ankizy: mihalehibe izy ireo ho olona, ​​ary tiako kokoa ny biby noho ny olona. Tsotra izany.” - Betty White
“Heveriko fa mila fitiavana ny rehetra. Na fitiavana iray na zato, izany no mahatonga ny fiainana ho mahaliana.” - Betty White
“Zavolahy voafandrika ao anaty vatana antitra aho.” - Betty White
“Eo amin'ny sehatry ny filalaovana sarimihetsika aho. Izay ilay resaka ego. Rehefa mahazo tolotra ianao dia tsy maintsy mankafy izany ny fandehan-javatra ankehitriny. Mila maka fotoana ianao hanandrana azy, ary ankasitrahanao ary araraoty izany.” - Betty White
“Tsy miraharaha ny zon'ny biby aho. Ny fiahiana ny biby sy ny fahasalamana ihany no tiako ambara. Niaraka tamin'ny Morris Animal Foundation aho hatramin'ny taona 70… Niara-niasa tamin'ny LA Zoo aho nandritra ny fotoana mitovy. Mahazo fanamboarana ny biby fiompiko aho!” - Betty White
“Olona ara-pahasalamana aho. Ny sakafo tiako indrindra dia ny hotdog miaraka amin'ny frites frantsay. - Betty White
“Tiako foana ny lehilahy be taona. Mahasarika ahy kokoa izy ireo. Mazava ho azy fa amin’ny taonako dia tsy dia betsaka loatra izany!” - Betty White
“Niara-niasa tamin'ny Morris Animal Foundation nandritra ny 50 taona mahery aho, niasa tamin'ny Zoo Los Angeles nandritra ny 50 taona mahery… tamin'ny fotoana iray, nilaza aho fa tsy misy olona miresaka fanaintainana amin'ny biby… manomboka izany.” - Betty White
“Raha samy mandray ny andraikiny manokana amin'ny biby fiompiny ny tsirairay, dia tsy hisy olana amin'ny biby ataonay. Raiso ny andraikitra ary miteraka hatsaram-panahy. ” - Betty White
"Raha tsy manana vazivazy ny olona iray, dia sahirana izy." - Betty White
“Raha miditra amin'ny seho Broadway ianao ary tsy mandeha izany, dia tsy fahombiazana ianao. Ary raha mandaitra izany, dia mety ho tafahitsoka ianao raha tsy fantatrao hoe hafiriana. Tsy dia tsara loatra amiko izany!” - Betty White
“Raha miara-mandeha amin'ny vadinao eny amin'ny sisin-dalana ianao, dia mbola tiako ny mahita lehilahy mandeha eny amoron-dalana, mba hiaro ilay ramatoa amin'ny fifamoivoizana… Mbola tiako ny mahita lehilahy manokatra varavarana. Tiako ireo fikasihan-tena ireo izay manjavona haingana. " - Betty White
“Tsy dia fantatra loatra fa ny biby fiompy iray ao anatin'ny telo no very mandritra ny androm-piainany, ary biby fiompy sivy tapitrisa eo ho eo no miditra amin'ny trano fialofana isan-taona.” - Betty White
“Tena nahatalanjona izany, saingy miarahaba ahy hatrany ny rehetra noho ny fitsanganako sy ny fiverenana lehibe. Mbola tsy lasa aho ry zalahy. Niasa tsy tapaka aho nandritra ny 63 taona farany.” - Betty White
"Mahafinaritra indraindray ny manao anjara matotra nefa tena tiako ny manao hatsikana satria tiako ny mihomehy." - Betty White
“Ny fomba fijerinao ny fiainana no zava-dehibe. Raha manamaivana ny tenanao ianao ary tsy mihevitra ny tenanao ho zava-dehibe loatra, tsy ho ela dia ho hitanao ny hatsikana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ary indraindray dia mety ho mpamonjy aina izany. " - Betty White
“Ataovy ao an-tsaina izay hahasoa ny hafa rehefa tsapanao fa tonga ny fanafihan’ny fahamarinana manadio fanahy.” - Betty White
“Zavatra iray tsy lazainy aminao momba ny fahanterana – tsy mahatsiaro ho antitra ianao fa mahatsiaro tena ho anao. Ary marina izany. Tsy mahatsiaro ho feno sivy amby valopolo taona aho. Sivy amby valopolo taona fotsiny aho.” - Betty White
“Nilaza tamiko ny olona hoe 'Betty, fomba tsara hifandraisana amin'ny namana taloha ny Facebook…' Amin'ny taonako, raha te hifandray amin'ny namana taloha aho, dia mila board Ouija aho." - Betty White
“Tsy teo akaikiny ny olona tsy tia saka. Misy ilay vazivazy taloha hoe: ny alika manana tompo, ny saka manana tehina. - Betty White
“Tsy ao anatin'ny voambolako ny fisotroan-dronono. Tsy hanala ahy toy izany izy ireo. - Betty White
“Noho izany dia tonga tany aho indray maraina ary tsy nahafantatra fa ho ao anaty rano mangatsiaka mangatsiaka be. Nilomano ity vehivavy mahantra ity, niditra izy. Azo inoana fa mametaka tsipìka amin'ny saribakoly Betty White izy." - Betty White
“Heno ny vazivazy rehetra ny mpanatrika ankehitriny. Fantatr'izy ireo ny teti-dratsiny rehetra… Mifaninana kokoa izany ankehitriny, satria betsaka kokoa ny mpihaino – te-hilaza aho hoe be pitsiny.” - Betty White
“Tsy misy raikipohy. Mazotoa amin'ny asanao sy ny fiainanao. Ataovy ao am-ponao foana ilay olona. Avereno ny fotoana tsara. Misaotra noho ireo taona nanananao.” - Betty White
“Tsy nanana Facebook izahay tamin'ny androko, nanana boky an-telefaona izahay saingy tsy handany andro amin'izany ianao.” - Betty White
“Eny, ny tiako holazaina, raha mahatsikaiky ny vazivazy na vazivazy, dia tsy maintsy mahatsikaiky izany mba hahazoana antoka izany. Tsy azonao atao ny manaratsy na maloto fotsiny noho ny maha-izy azy – tsy maintsy mampihomehy izany.” - Betty White
“Rehefa manao pontificate aho dia toa izany, fantatrao, oh, eny, mitory izy. Tsy mitory aho, fa heveriko fa avy amin'ny namako biby no nianarako izany. Ny hatsaram-panahy sy ny fiheverana olona ankoatry ny tenanao.” - Betty White
“Nahoana no hisotro ronono amin'ny zavatra iray ianao raha tena tia an'io ianao ary mankafy azy io… Inona no hataoko amin'ny tenako?” - Betty White
“Azonao lazaina foana ny momba ny olona iray amin'ny fomba fametrahany tanana amin'ny biby iray.” - Betty White
“Fantatrao ny olona efa miteny hoe: 'Ho 30 taona aho – oh, inona no hataoko?' Eny, ampiasao io folo taona io! Ampiasao daholo ireo!” - Betty White
Ahoana ny fanoratana lahatsoratra tsara ho an'ny TOEFL IBT
Model Fact hoy:
Jona 19, 2022 amin'ny 11: 52 pm
Betty White dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika sy mpanao hatsikana tiako indrindra. Misaotra anao nanangona ny teniny.